मुटुको स्वास्थ्यको लागि किन खराब छ राति अबेरसम्म बस्ने बानी ? | सुदुरपश्चिम खबर
मुटुको स्वास्थ्यको लागि किन खराब छ राति अबेरसम्म बस्ने बानी ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १९, २०७८ 2
राम्रो निद्रा राम्रो स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ। समयमा राम्रो निद्रा लिँदा मात्र हाम्रो शरीरले मात्र तपाईंको शरीरलाई आराम दिन्छ । यदि तपाईं दैनिक पर्याप्त निद्रा लिनुहुन्न वा सही समयमा सुत्नुहुन्न भने यसको असर स्वास्थ्यमा देखिन्छ ।
समयमा नसुत्नुको असर मुटुसम्म पर्न सक्छ । राति ढिलोसम्म नसुत्नाले मुटु रोगको खतरा बढ्छ। हरेक दिन सही समयमा नसुत्नु वा राति ढिलोसम्म नसुत्दा मोटोपना, मुटु रोग र मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगको जोखिम पनि बढी हुन्छ । राति ढिलासम्म बस्दा पर्न सक्ने समस्याहरू स्
राति ८ घण्टाभन्दा कम सुत्नु शरीर र स्वास्थ्य दुवैका लागि फाइदाजनक मानिँदैन। जो मानिसहरु राति ढिलोसम्म बस्छन् र पर्याप्त निदाउँदैनन् उनीहरु मुटुको गम्भीर समस्याहरुको जोखिममा पर्छन्। यस्ता मानिसहरुमा रक्तचाप, हृदयघात जस्ता गम्भीर रोगहरु पनि हुन सक्छ । यसबाहेक रक्तचाप घट्नु सास फेर्न गाह्रो हुनु जस्ता समस्या पनि देखिन्छ । यसबाहेक राति ढिलासम्म ननिदाउनु र कम सुत्नुका बेफाइदाहरू निम्मानुसार छन् ।
राति ढिलो गरी उठ्नाले तपाईं उच्च रक्तचापको जोखिममा पर्नुहुन्छ । सामान्यतया, रक्तचाप निद्राको समयमा घट्छ, तर जब तपाईं राति अबेरसम्म जागा रहनुहुन्छ भने रक्तचाप शरीरमा उच्च नै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा शरीरमा लामो समयसम्म उच्च रक्तचापको समस्या बढ्ने जोखिम हुन्छा।
पर्याप्त निद्रा नपुग्दा मानिसलाई हृदयघातको खतरा बढ्छ। राति ढिलोसम्म बस्ने वा पर्याप्त निद्रा नपुग्नेहरुलाई हृदयघातको उच्च जोखिम हुन्छ। यसको कारण यो हो कि राति ढिलोसम्म जागै रहँदा व्यक्ति उच्च रक्तचाप र मधुमेहको समस्याबाट ग्रस्त हुन सक्छ, जुन हृदयघातको सबैभन्दा ठूलो कारण मानिन्छ।
पर्याप्त निद्रा नपुग्दा मुटुरोगको साथै अन्य गम्भीर मुटु रोगहरु निम्तिन सक्छ। राति ढिलोसम्म बस्नु मुटुको स्वास्थ्यका लागि गम्भीर मानिन्छ। मुटु स्वस्थ राख्नका लागि दैनिक पर्याप्त निद्रा लिनु आवश्यक छ। जो मानिसहरु राति ढिलोसम्म बस्छन् वा राति कम सुत्छन् भने उनीहरूमा हृदय विफलताको जोखिम बढ्छ।
राति ढिलोसम्म बस्नु वा कम सुत्नका लागि त्यहाँ मुटुसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्याहरु छन् । यदि तपाईं पर्याप्त निद्रा पाउनुहुन्न भने तपाईंमा तनाव र दुखाइको महसुस गराउँछ । शरीरमा सीआरपी वा सी(रिएक्टिभ प्रोटिन बढेर गम्भीर मुटु रोग लाग्न सक्छ। यसको कारण, हृदयघात जस्ता गम्भीर समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले पर्याप्त निद्रा मुटु र शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। अनलाइनखबर बाट सभार